Sida Loo Sameeyo Tareenka Halista Ah Xitaa Miisaaniyad Aad U Fiican | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Sida Loo Sameeyo Tareenka Halista Ah Xitaa Miisaaniyad Aad U Fiican
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 24/10/2020)
Ku safridda tareenka waa khibrad soo jiidasho leh oo bixisa daraasiin abaalmarin ah. Tareenadu waxay kuu soo dhoweynayaan muuqaalka: ma arki doontid adhi daaqaya oo daaqaya ama neefsan doona udgoonka berrinka tulips ee kursiga dhexe ee Airbus. Tareenadu waxay kugu soo jiidi karaan duleedada iyo Inuu ku dhigo magaalada dhexdeeda waqti aan badnayn. Waad kala bixin kartaa oo nasan kartaa oo aad ka sheekaysan kartaa a masaafo raaxo leh Rakaabka safarka ah markaad raacayso tareenka. Qaarkood waxay dhihi karaan safarka tareenka waa abaal marin u gaar ah maxaa yeelay mar kasta oo aan tareen raacno, waxaan gacan ka geysaneynaa sidii loo joogteyn lahaa warshad muhiim ah iyo dhaqan firfircoon. Laakiin maanta waxaan halkaan u nimid inaan ka hadalno nooc kale oo abaalmarin ah-oo kaa caawin kara raac tareen fara badan oo aad aragto adduun ballaadhan oo adduunka ka mid ah ama sida loo sameeyo tacabur tareen xitaa miisaaniyad-saaxiibtinimo badan. Waa noocyada abaalmarinta ee ay soo saaraan shirkadaha kaararka deynta socdaalka. Ururintooduna waxay noqon kartaa istiraatiijiyad caqli gal ah oo lagu maalgeliyo fasaxyada aad ku riyoonayso inaad qaadato.
1. Sida Loo Sameeyo Tareenka Halista Ah Xitaa Miisaaniyad Aad U Fiican: Kaararka Deynta Safarka Way Kala Duwanyihiin
Dadku caadi ahaan waxay ku hayaan kaararka deynta ee dhaqankooda boorsooyinkooda dhowr sababood awgood. Mararka qaarkood waxaan qaadanaa kaarka amaahda si fudud si looga fogaado in lacag badan ay ku jirto jeebabkayaga - dhaqankaas oo qatar gelin kara, qaasatan markaan safrayno. Kaararka amaahdu sidoo kale waxay naga caawinayaan inaan iska bixinno iibsiyada aannan awoodin inaan mar wada wada bixino, ha ahaadaan baahi ama wax fiican in la haysto. Tababbarka ugu horreeya waa hab fiican oo wanaagsan oo lagu isticmaalo amaahda safarka. Dhab ahaan, sida ugu wanaagsan ee abaal marin looga kasban karo kaarkaaga amaahda safarka waa inaad badanaa isticmaasho, gaar ahaan iibsiyada waaweyn. Laakiin dhaqanka labaad wuxuu noqon karaa mid khatar ah markaad isticmaaleysid kaarka deynta safarka. maxaad? Maxaa yeelay,, halka celceliska dulsaarka ay soo rogtay warshadaha kaararka deynta guud ahaan - waxaadna heli kartaa in badan oo intaas ka qiimo yar - waa 14.52%, kaararka deynta safarka qaarkood ayaa kor looga qaadaa 25%. Qaar badanna waxay qaadaan khidmado sanadle ah oo culus. Qaadashada isku dheelitirnaan sare kaarka deynta safarka ayaa kugu kicin doonta qarashka dulsaarkaaga waqti la'aan. Marka sharciga ugu horeeya ee isticmaalka kaarka amaahda safarka marna lacag badan ha lagaa qaadin intaad awoodi kartid inaad ku bixiso hal wareeg oo biil ah.
2. Faa'iidooyinka Isticmaalka Kaarka Deynta Safarka
Shirkadaha kaararka amaahda safarka waxay ka walwalsan yihiin inay lahaadaan meheraddaada. Waxay la tartamayaan shirkadaha kale inay kasbadaan. Bixinta barnaamij abaalmarin gaar ah oo adag waa habka ugu weyn ee ay ku kala soocaan suuqa iyo soo jiidashada macaamiisha.
Faa'iidooyinka ayaa maamula ciyaarta. Shirkadaha qaar waxay kugu abaalmariyaan maylal xajmi badan leh. Aynu nidhaahno waxaad tahay qof reer New Yorker ah oo qorsheynaya safar dhadhamin ah oo ku yaal Bordeaux, Qaybta koowaad ee safarkaaga waxay u badan tahay duulimaad ku tagaya Paris-taas oo ay u badan tahay inay noqoto kharashka ugu badan ee safarkaaga ah. (Taasi waa ilaa aad dhadhamineyso qaar ka mid ah guryo aad dhif u ah!) Masaafada badan ee duulimaad ee aad kasbato ayaa kuu iibsan kara tikidkaas diyaaradda. Qaar ka mid ah shirkadaha kaararka deynta safarka waxaa ka mid ah tikidhada wehelka sanadlaha ah oo qayb ka ah qaab dhismeedka abaalmarintooda, si aad saaxiib ula imaan kartid wax xiise leh. Shirkadaha kale waxay bixiyaan abaalmarino duulimaadkaaga ka dhigi kara mid raaxo leh, laga soo bilaabo casriyayntii heerka koowaad ilaa marin u helida qolalka diyaaradaha ee garoomada adduunka oo dhan. Qiima dhimista hudheelada iyo maqaayadaha sidoo kale waxay muujinayaan qaababka abaalmarinta kaararka deynta safarka qaarkood.
3. Sida Loo Sameeyo Tareenka Halista Ah Xitaa Miisaaniyad Aad U Fiican: Soo Xulistayada Macaamiisha
Lacagta ugu dabacsan ee aad kasban karto ayaa ah lacag celinta wixii aad ku iibsatay. The kaararka deynta safarka ugu fiican bixin 2% dib ugu noqo dhammaan wixii aad iibsatay. Qaarkood waxay kordhiyaan boqolkiiba lacagtooda dib u celinta illaa iyo inta 6% qaybaha xulashada, oo ay ku jirto duulimaadka, cuntada, iyo iibsashada hoteelka. Haddii aad u isticmaasho kaarkaaga deynta socdaalka si joogto ah - xitaa inaad ku bixiso waxyaabaha maalinlaha ah sida raashinka iyo gaaska — abaalmarinnada lacageed ayaa si dhakhso leh isugu dari kara oo waxaa loo isticmaali karaa in lagu dheellitiro wixii kharash safar ah ee aad jeceshahay, oo ay ku jiraan kaarkaaga soo socda ee tareenka. Laakiin markale, macno kaliya ayaa u leh isticmaalka kaarkaaga deynta safarka sidan haddii aad diyaar u tahay inaad bixiso dheelitirkaaga bil kasta.
4. Talooyin ku saabsan doorashada Kaarka Deynta Safarka
Kaararka amaahda safarka badanaa waxay isticmaalaan nooc dhibic ah nidaamka dhibcaha si loo xisaabiyo abaalmarinta aad kasbato nidaamyadani waxay u muuqdaan kuwo murugsan. Intaa waxaa dheer, kaadhadhka qaarkood ayaa soo rogaya shuruudaha iibsiga ugu yar ka hor intaadan kasban wax dhibco ah gabi ahaanba. Tusaale ahaan, waxaa lagaa rabi karaa inaad sameyso a $1000 ama ka badan iibsashada muddo saddex bilood ah ka hor intaadan bilaabin inaad kasbato dhibco. Ku dhigista tigidhka diyaaradda kaarkaaga deynta safarka waa hab fudud oo lagu dabooli karo ugu yar. Laakiin sidoo kale waad la kulmi kartaa adiga oo isticmaalaya kaarkaaga dhowr bilood si aad ugu bixiso qarashaadka maalinlaha ah. Kaliya iska hubi inaad la socoto waxyaabaha aad soo iibsatay si aad u hubiso inaad ku socoto wadada bil kasta si aad u gaarto hadafkaaga kharash garaynta.
Qiyaastaada ugufiican ayaa ah inaad isbarbar dhigto mid kasta oo kaararka aad ka fiirsaneyso tufaaxa. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad u sameyso xaashiyaha ujeedada ujeedkan si aad u hubiso inaad qabsaneyso dhammaan astaamaha kaar kasta oo aad sameyneyso isbarbardhig cadaalad ah. Hubso inaad ku darto xiisaha APRs, shuruudaha iibsiga ugu yar, cashback boqolkiiba, iyo khidmadaha sanadlaha ah ee kaarkaagu ku dallaco xisaabintaada.
5. Sida Loo Sameeyo Tareenka Halista Ah Xitaa Miisaaniyad Aad U Fiican: Talada Ugu Dambeysa
Wanderlust wuxuu noqon karaa rabitaan aan la celin karin. Sida khubarada safarka, waxaan kaa codsaneynaa inaad si masuuliyad leh u isticmaasho amaahda. Sidoo kale, waxaan kaa codsaneynaa inaad tixgeliso masuuliyadaada meeraha. Sameynta xulashooyinka safarka ee leh saameyn hooseeya deegaanka, sida safraya tareen halkii aad ka heli laheyd gaari si aad u sahamiso meesha aad u socoto, waa hal dariiqo oo lagu safro iyadoo run loo yahay mabaadi'da waaritaanka.
halkan at Save A tareenka, we will be happy to help you plan your vacation in Europe by train.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "Sida Loo Sameeyo Tareen Tartan Xitaa Miisaaniyad Badan-Saaxiibtinimo" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/train-adventure-budget-friendly/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa jidadkeena tareenka ugu caansan - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / PL inay / fr ama / de iyo luuqado badan.
BudgetFriendly CreditCards TrainAdventure tareen safarka TravelCreditCards
Susan Doktor waa suxufiyad iyo istiraatiijiyad ganacsi oo ka soo jeeda magaalada New York isla markaana si weyn ugu safartay tareen. Waxay wax ka qortaa mowduucyo kala duwan, oo ay ku jirto dhaqaalaha, safarka, iyo cunto iyo khamri. Follow her on Twitter @branddoktor or you can click here to ila soo xiriir
Safrida In Europe On Talooyin Miisaaniyadda A